UNIGLOBE gbasaa na Malaysia tinyere mgbakwunye nke Sayu Travel na Tours
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » UNIGLOBE gbasaa na Malaysia tinyere mgbakwunye nke Sayu Travel na Tours
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
UNIGLOBE Njem International gbasaa netwọkụ ya Malaysia na mgbakwunye nke UNIGLOBE Sayu Travel na Tours.
UNIGLOBE Sayu Travel na Tours bụ ụlọ ọrụ edebanyere aha IATA na ndị ọrụ 50 nọ na mpaghara asatọ, gụnyere Kuala Lumpur. Ndị otu a nọ na-arụrụ ndị ụlọ ọrụ, ndị gọọmentị na ndị njem ezumike nọ na Malaysia kemgbe 1992 ma bụrụ isi ụlọ ọrụ na Miri, na steeti Sarawak.
David kwuru, sị: "N'ụbọchị taa nke ijikọ ụwa ọnụ na ijikọ azụmahịa, ịdị na-eche banyere azụmahịa nke njem ụlọ ọrụ na-eme ka ọ bụrụ ihe dị oke mkpa iji wulite na ihe ọmụma na ahụmịhe mpaghara siri ike site na ịbụ akụkụ nke ụdị ụwa niile nke gbadoro anya na ọrụ, netwọkụ na teknụzụ," Hughes, Onye Nchịkwa, UNIGLOBE Travel (Asia Pacific). “UNIGLOBE Travel na-enye netwọkụ nke TMC n’ihe karịrị mba 60 gburugburu ụwa nke ga-atụgharị uru na nchekwa maka ndị ahịa Sayu, ebe Sayu Travel na Tours’ Leadership ga-ewusi akara ngosi anyị na ohere nnabata na Malaysia na mpaghara Asia Pacific sara mbara. ”.
"Enwere m obi ụtọ ịnabata ndị otu UNIGLOBE Sayu Travel na Tours na onye nwe Dato 'Mohammed Rhiza Bin Ghazi na ezinụlọ anyị zuru ụwa ọnụ," ka onye nchoputa UNIGLOBE Travel na onye isi ọrụ U. Gary Charlwood kwuru. “Malaysia bụ isi njem njem azụmahịa na South East Asia. Ndị otu ọkachamara na mpaghara ahụ, ọkachasị na Kuala Lumpur, ga-abụ nnukwu uru na netwọọdụ njem ụlọ ọrụ anyị. ”
Na-arụ ọrụ n'ụwa niile iji jeere ndị ahịa nọ na mpaghara ihe karịrị mba 60 ozi, UNIGLOBE Travel na-eji teknụzụ dị ugbu a na ọnụahịa ndị na-ebubata ngwa ahịa iji chekwaa ndị ahịa oge na ego na atụmatụ njem na njem. Kemgbe 1981, ndị njem ụlọ ọrụ na oge ezumike dabere na akara UNIGLOBE njem iji nyefee ọrụ gafere atụmanya. UNIGLOBE Travel malitere site na U. Gary Charlwood, onye isi oche ma nwee isi ulo oru ya na Vancouver, BC, Canada. Ọnụ ahịa ahịa kwa afọ bụ $ 5.0 + ijeri.